Kazakstàna: Fihenjanana Ara-poko sy Fanamaivanana ny Maha Izy Azy · Global Voices teny Malagasy
Kazakstàna: Fihenjanana Ara-poko sy Fanamaivanana ny Maha Izy Azy
Voadika ny 23 Avrily 2018 17:10 GMT
Firenena iray matetika mihambo ho mandefitra ny firaisam-poko sy ny fahasamihafan'ny finoana i Kazakstàna – nandray mpiasa mpifindra monina marobe avy any Okraina sy Rosia izy tamin'ny vanimpotoan'ny mpanjaka. Toerana fandefasana ireo firenena nalefa sesitany sy ireo gadra pôlitika izy tamin'ny fotoan'i J. Stalin. An'arivony ireo manampahaizana eo amin'ny sehatry ny indostria sy ny fambolena no tonga teto nandray anjara tanatin'ny fampanarahana toetrandro ny toekarena tao amin'ny repoblika tamin'ny faramparan'ny vanimpotoana Sôvietika. Tamin'ny 1980 no nahazoan'i Kazakstàna ny anarana hoe “toeram-pikarohana ny finamànana iraisam-poko” ary ankehitriny dia mandray ny Zaikaben'ny fankatoavana iraisam-pinoana eo ambany fiahian'ny filoham-pirenena Nazarbayev ny renivohitra vaovao, Astana. Amin'izay fotoana izay ihany anefa dia tsy ny rehetra no mieritreritra fa endrik'i Kazakstàna maoderina io, satria miseho eny amin'ny fiainana andavanandro ny fihenjanana madinika eo amin'ny foko ary manjaka ao anatin'ny rafi-panjakana ny teratany Kazaka.
Mitandrina loatra momba ny fahabetsahan'ny Kazaka izay manenika ireo sampan-draharaham-panjakana i Slavoyara, mpanao gazety iray sady anaty foko Rosiana mipetraka ao Afovoan-tanin'i Kazakstàna, hany ka mieritreritra mihitsy ny hifindra monina:
“Ohatra izao ny fiasan'ny mizàna ara-pôlitika eto… Rehefa mitovy tantana ny isan'ireo foko rehetra ao anatin'ny governemanta, anatin'ny sampan-draharaha misahana ny hetra, ny fitantanana anatiny sns, izay vao ho afaka hiresaka sy hiady hevitra momba izany isika. Tsoriko fa tsy miraharaha loatra ity olana ity aho. Maina tsara izahay, mahazo vola ary misakafo tsara. Saingy hiaina anatinà firenena iray hafa – tena iraisam-pirenena – ireo zanako. Ary hiteny Anglisy izy ireo, fa tsy Kazaka” [ru].
Ny mahaliana, manatri-maso toejavatra hafa amin'izay i aslili, bilaogera iray hafa avy any Kazakstàna Avaratra (izay araka ny tantara dia avo dia avo ny ampahan'ny mponina Rosiana), ary miantso an'i Kazakstàna ho “firenena hendry tsara” mahay misoroka ireo fifandonana:
“Mipetraka ao amin'ny efitrano fitsaràna izahay – Rosiana teraka tany Armenia ny tenako, ny mpisolovavanay kosa Rosiana teraka tany Karabah, ny mpitsara Kazaka teraka tany Rosia, ny mpisolovava iray hafa Kazaka avy eto an-toerana, ary ny manampahaizana ao amin'ny fitsaràna dia Tatar teraka tany Bashkiria (faritany iray ao amin'ny Federasiona Rosiana). Avy eo aho mivoaka midina any an-tsena – mividy voaloboka eo aminà Uzbek, salady eo aminà Koreana, ampongabendanitra eo aminà Azeri. Anatinà toeram-pivarotana goavana misy ankizivavy Chechen manontany ahy ny endriky ny akanjo vaovao eny aminy… Tena sariaka sady mahay mifanaja ny olon-drehetra” [ru].
Tsy faly loatra amin'ny toetsain'ny Kazaka ankehitriny i Megakhuimyak, bilaogera Kazaka avy ao Almaty – atao anjorombala ny kolontsaina Kazaka sy ireo hetsi-pirenena ary tsy mifantoka amin'ireo olana sôsio-pôlitika, fa amin'ny olan'ny teny. Maneho ny heviny i Megakhuimyak momba ilay fanadihadiana an'i Dos Kushim, tia tanindrazana, mpikambana ao amin'ny Fitsaràna Sivily eo ambanin'ny filoha. Milaza ilay mpanao gazety teo aloha sady lefitry ny governora taloha fa tsy manan-danja nòho ny fahafahana miresaka aminà manampahefana amin'ny teny Kazaka ny fifidianana marina ho anà Kazaka iray. Naneho hevitra hafahafa koa i Kushim fa ny toetsaina Kazaka dia ny hoe “marina foana ny lehibe”.
“Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia toy izao ny hafatra: “mahazo manao izay tianareo aminay ianareo, saingy tianay tokoa raha amin'ny teny Kazaka ihany no hitabatabanareo anay” [ru]”.
Kazakhstan 3 andro izay
Tajikistan 1 herinandro izay